INgxowa-mali yeFundación Repsol yoShishino ngo-2017 | Ezezimali
I-Fundación Repsol yasungula iNgxowa-mali yayo yooSomashishini ngo-2011, a Ingcali yokukhawulezisa ishishini ekuqaleni kwamandla. Injongo kukuqinisekisa ukuba ezona zisombululo zisemgangathweni zifikelela kwintengiso ngexeshana elifutshane elinokubakho, kuxhamla uluntu luphela kunye negalelo kuphuhliso lomfuziselo wamandla ozinzileyo.
1 Yintoni iNgxowa-mali yoSomashishini yeFundación Repsol?
2 Ingxowa mali yoosomashishini kule minyaka idlulileyo
3 Iingcebiso ngokuthatha inxaxheba
Yintoni iNgxowa-mali yoSomashishini yeFundación Repsol?
Isantya sokunyusa ishishini esibonelela ngenkxaso yemali engabuyiswayo, iingcebiso ezivela kwiqela labacebisi, uqeqesho kwishishini, kunye nokufikelela kubuchule obunokubakho kunye nabatyali mali bembewu. Umnxeba wesithandathu weli nyathelo ngoku uvulekile, obonelela ngesikhuthazo esinomdla kakhulu kubaqalayo abasebenza kwiiprojekthi zamandla okanye ukuhamba. Abarhwebi abanomdla banokungenisa izindululo zabo kwiwebhusayithi fondoemprendedores.fundacionrepsol.com
Ubhaliso lwenziwa kwi-Intanethi, ukusuka kwintuthuzelo yekhaya okanye nayiphi na enye indawo, ngaphandle kweenkqubo ezongezelelweyo kwaye ngaphezulu kwako konke ngaphandle kwendleko.
I-Fundación Repsol ixhasa ukuqala kwamanqanaba amabini ophuhliso. Kwelinye icala, "iiprojekthi", ezinobuchwephesha bokuyila kunye / okanye imodeli yeshishini esele ibonakalisiwe kwindawo elawulwayo okanye kwindawo eyiyo, kwaye engekafiki kwinqanaba lokuthengisa ngokupheleleyo. Kwelinye, sisebenza kunye "nemibono", eyisiqalo ngophuhliso lwangaphambili.
Kwangaphambili, ukongeza kwiingcebiso noqeqesho, isixa soqoqosho se-144.000 ye-euro ibonelelwa kwimali engabuyiswayo kunyaka omnye. Ngezimvo, inkxaso yemali ngama-2.000 euros ngenyanga kwiinyanga ezili-12. Inkqubo yokukhawulezisa ithatha unyaka omnye, kodwa kwimeko yeeprojekthi, kunokwenzeka ukuba wandise unyaka ongomnye, apho baya kufumana enye i-euro eyi-144.000.
Umnxeba ujolise kwii-SMEs, nangona abantu abaneprojekthi entsha kwicandelo lezamandla nokuhamba kodwa abangekazinzisi inkampani yabo banokuthatha inxaxheba.
Elinye inqaku elinomdla ngeli nyathelo kukuba li umkhankaso wamazwe ngamazwe, apho iziqalo ezivela kwihlabathi liphela zinethuba lokuthatha inxaxheba, kuba oko akufuneki ukuba uqhubele nakweyiphi na indawo yokusebenza ngokuqhubekayo. INgxowa-mali yoRhwebo yeFundación Repsol, inikeza inkxaso yayo kwiinkampani ezisebenza kuyo nayiphi na kwezi zintathu amacandelo:
Ukusebenza ngokukuko, ukufakwa ekhompyutheni kunye nezixhobo ezitsha kumashishini ezamandla kunye neekhemikhali
Ukuhamba kwabantu kunye nezinto, kubandakanya iinkqubo zolawulo ezinje ngeDatha eNkulu kunye neNzululwazi yeDatha
Ukuhanjiswa okuvelisiweyo, kunye nokugcinwa kombane.
Ingxowa mali yoosomashishini kule minyaka idlulileyo
Emva kweefowuni ezintlanu, iFundación Repsol ikhomba ukuba okwangoku Iziqalo ezingama-37 ezikhawulezisiweyo yi Ingxowa mali yoosomashishini. Oku kuqalwa kufezekise malunga ne-13 yezigidi ze-euro zombini kutyalo-mali nakwezemali zangaphandle, ndingasathethi ke ukuba babhalisile ngaphezulu kwamalungelo awodwa omenzi wechiza angama-30.
Kukwabalulekile ukukhankanya ukuba ukusungulwa kwayo ngo-2011, isiseko ifumene ngaphezulu kwezindululo ezingama-2.000 XNUMX ezivela kubaqalayo ezifuna ukuthatha inxaxheba nokuxhaphaza amandla abo. Kule fowuni intsha, zonke iinkampani ezikhethiweyo ziya kubhengezwa ngexesha le- kwikota yesithathu yalo 2017.
Iingcebiso ngokuthatha inxaxheba
Ukufumana amathuba amakhulu okufikelela inkxaso evela kwiNgxowa-mali yoSomashishini yeFundación Repsol, Isiqalo esinomdla kufuneka siqwalasele ezi ngcebiso zilandelayo:
Qiniseka ukuba isicelo sakho siyahlangabezana ne- iimfuno zokuthatha inxaxheba, ukongeza ekuhlangabezaneni nayo yonke imiqathango emalunga nobubanzi besindululo.
Bhalisa iprojekthi kwi-intanethi kwiwebhusayithi esemthethweni yeSiseko kunye nedatha echanekileyo.
El Umhla wokugqibela wokubhalisa Iqale nge-16 kaJanuwari 2017 kwaye izakuqhuba kude kube nge-31 ka-Matshi kulo nyaka, nangona kunjalo kunokwenzeka ukuba iirekhodi ziya kuvalwa ngaphambi kwalo mhla.
Kuyacetyiswa ukuba ugcwalise ngokupheleleyo zonke idatha yeprojekthi kunye nolwazi, kunye nokubonelela ngamaxwebhu ayimfuneko afunekayo kwifom. Iziqalo zinokuncamathisela amaxwebhu ongezelelweyo ngokuchanekileyo ngakumbi iinkcukacha zeprojekthi.
Isiqalo ngasinye sinokubonisa zonke izindululo ezibona kufanelekile, zihlala zithathela ingqalelo iimfuno kunye neziseko zomnxeba.
Emva kokungenisa ulwazi lweprojekthi kunye ne ulwazi lomntu, Ukuqala kuya kuba nakho ukongeza ulwazi ngakumbi ngeakhawunti yabo yomsebenzisi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » ishishini » iinkampani » I-Repsol Foundation ye-Fund ye-Fund Campaign 2017
Ubhalisa nini njengomntu osebenza yedwa
Ukurhweba ngokurhweba, yonke into oyifunayo kufuneka uyazi malunga nokuziqhelanisa nezoqoqosho